ကျောင်းသူလေးနဲ့ …ကားစပါယ်ယာ ၂ ဦးလုံး… သေဆုံးသွားရပြီ – ရှအေလငျး
ကျောင်းသူလေးနဲ့ …ကားစပါယ်ယာ ၂ ဦးလုံး… သေဆုံးသွားရပြီ
၂ ဦး သေ ဆုံးပါ တယ် … တစ်ဦးက ကျောင်းသူလေး ၊ တစ်ဦးက ကားစပါယ်ယာ ဖြစ်ပါတယ်
၂ ဦး လုံး ကားနှ စ်စီးမှာ ညပ်နေပြီး ၊ ချောက်ကလာတဲ့ ကားပေါ်မှာ တစ်ဦး ၊ မကွေးက လာတဲ့ ကားပေါ်မှာ တစ်ဦး မကွေး မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ယူပြီး Dead Body များအား ရေနံချောင်း သို့ ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ် တဲ့ ခင်ဗျာ …..
ကေ နဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူများကိုတော့ မကွေး မီးသတ်ဦးစီးဌာန မှ လူနာတင်ယာဉ်များ ၊ မကွေးကရုဏာရှင်အသင်း လူနာတင်ယာဉ်တို့ဖြင့် ၊မကွေး တိုင်းပြည့်သူဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ် …
ကြံ ပား ရေ နံချောင်းလမ်း ၊ ဒေါင်းနေချောင်း တံတားအကျော် မြေပြာကန် ရွာလမ်းခွဲအနီး၊ ရွှေမိတ်သစ် (ချောက် – မကွေး) ခရီးသည်တင်ယာဉ် နှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်မိတာ ဖြစ်ပါတယ်
ထိ ခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိသူ များပါတယ် ………..
စည်ဖြိုးသူ / MZT
၂ ဦး သေ ဆုံး ပါတယျ … တဈဦးက ကြောငျးသူလေး ၊ တဈဦးက ကားစပါယျယာ ဖွဈပါတယျ
၂ဦးလုံး ကားနှဈစီးမှာ ညပျနပွေီး ၊ ခြောကျကလာတဲ့ ကားပျေါမှာ တဈဦး ၊ မကှေးက လာတဲ့ ကားပျေါမှာ တဈဦး ….
မကှေး မီးသတျဦးစီးဌာနမှ ထုတျယူပွီး Dead Body မြားအား ရနေံခြောငျး သို့ ပို့ဆောငျပေးလိုကျပါတယျ တဲ့ ခငျဗြာ
ကနဦေး ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိသူမြားကိုတော့ မကှေး မီးသတျဦးစီးဌာန မှ လူနာတငျယာဉျမြား ၊ မကှေးကရုဏာရှငျအသငျး လူနာတငျယာဉျတို့ဖွငျ့ ၊မကှေး တိုငျးပွညျ့သူဆေးရုံကွီးသို့ ပို့ဆောငျလိုကျပါတယျ …
ကံပွား ရနေံခြောငျးလမျး ၊ ဒေါငျးနခြေောငျး တံတားအကြျော မွပွောကနျ ရှာလမျးခှဲအနီး၊ ရှမေိတျသဈ (ခြောကျ – မကှေး) ခရီးသညျတငျယာဉျ နှဈစီး မကျြနှာခငျြးဆိုငျ တိုကျမိတာ ဖွဈပါတယျ
ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိသူ မြားပါတယျ ………..
စညျဖွိုးသူ / MZT
ပရိသတ်ကြီးကရော “ချစ်ချစ်နဲ့ ဝေယံကျော်” ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်ကြလဲ.???
“သင်္ကြန်မှာရေတွေ…. ဖြုန်းတီးတာကို နှမြောတယ်ဆိုတဲ့ …ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်”
TV ခိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့ သူခိုး အိမ်ရှင်ခွေးကြောင့် သေလုမျောပါးဖြစ်သွား
တောင်ငူတွင် ဇနီးမောင်နှံ ၂ ဦးကို ကြွေသီးခေါင်းဖြင့် မသေမချင်း ထုသတ်တဲ့...
ဝေမျှ ကုသိုလ် 💰💰🙏သစ်တံခါး ဆရာတော် ကြီး၏….ကံပွင့် ကံမြင့်စေဖို့… ”...
အဘိုးအဘွားတွေကို တောင်းရမ်းခိုင်းပြီး ခိုင်းစားနေတဲ့ နောက်ကွယ်က ဂိုဏ်းတခုကို...